Bollywood's romantic hero Rishi Kapoor dies
TOOS Itoobiya oo xirtay telefishin ay ku eedeysay 'kicin dadweyne'
Faransiiska oo hakiyay dowrkiisa howlgalka Nato xilli uu khilaaf wayn kala dhaxeeyo Turkiga
Paris ayaa sheegtay in Turkiga uu badda Mediterranean-ka ku bartilmaameedsaday markab uu Faransiisku leeyahay - eeddaas oo ay Ankara si kulul gaashaanka ugu daruurtay.
Nin hubeysan oo xoog ku galay xaafad uu deggan yahay ra'iisalwasaaraha Canada
Nin hubaysan oo ka tirsan milatariga dalka Canada ayaa la qabtay ka dib markii sida uu boolisku sheegay uu xoog ku galay albaabka xaafad uu deggan yahay ra'iisalwasaaraha dalkaasi Justin Trudeau.
2 Luulyo 2020
Muuqaal, 'Calankeena cirkuu u eg yahay': "Soomaaliya ma tagin sannadkastana waan xusaa xoriyadda", 1,17
Saynab faarax oo ku nool Australia ayaa BBC uga sheekeysay sida ay sannad kasa u xusto maalmaha xoriyadda in kastoo weligeed aysan Soomaaliya tagin.
Muuqaal, Maxay tahay sababta uu ninkan caddaanka ah uu gurigiisa u suro calanka Soomaaliya?, 2,05
Nin ku nool Australia ayaa sanadwalba gurigiisa ka taaga calanka Soomaaliya. Ninkaas wuxuu deggan yahay xaafadda ay Soomaalidu ku badanyihiin ee magaaladaasi Melbourne.
Muuqaal, Xaliimo Yarey oo faahfaahin ka bixisay laba nooc oo ay u dhici karto doorashada Soomaaliya, 4,28
28 Juunyo 2020
Muuqaal, Faysal Cali Waraabe oo ka horyimid wada-hadalada Somalia-Somaliland ee Jabuuti, 4,30
Faysal oo ka mid ah mucaaradka Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa diidan in kulanka uu dhaco.
Muuqaal, Nin Caddaan ah oo Afka Soomaaliga ku hadla oo sameeyay bar uu corona dadka uga wacyigeliyo, 3,49
Nin Caddaan ah oo Afka Soomaaliga ku hadla oo sameeyay bar uu corona dadka uga wacyigeliyo oo dad badan ay ka qeybgalki karaan.
Muuqaal, Soomaalida sidey u arkaan Iskuullada dib loo furay?, 2,08
Iskuullada dalka Koonfur Afrika ayaa dib loo furay ka dib markii la qafiifiyay xayiraddii dalkaas saarneyd ee looga hortagayay cudurka corona.
10 Juunyo 2020
Soomaaliya oo 60 jirsatay
Wararka 60- guurada xornimada Soomaaliya
Faalooyin ku saabsan Soomaaliya oo lixdan jirsatay
Tabobaraha Manchester City, Pep Guardiola, ayaa sheegay in ciyaartoyga kooxdiisu salaan sharafeed ku siin doonaan garoonka Etihad Stadium maalinta Khamiista ah naadiga Liverpool ee ku guulaystay horyaalka Ingiriiska.
Kooxda Liverpool ayaa cambaaraysay hab-dhaqanka qaar ka mid ah taageerayaasheeda oo iskugu soo baxay badhtamaha magaalada markii kooxdu ku guulaysatay horyaalka Ingiriiska, waxaanay kooxdu falalka taageerayaashaa ku tilmaantay "wax aan la qaadan karin".
Maxamuud Cali “Tallaabadan waxay iga caawin doontaa inaan xulka qaranka Soomaaliya meel fiican gaarsiiyo”
Maxamuud Cali Maxamed wuxuu ka mid yahay ciyaaryahannada xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya ee lagu naaneyso Xiddigaha Badweynta.
18 Juunyo 2020
Geeridii Floyd: Ciyaartoyga Liverpool oo sawir fariin ah diray
Ka dib geeridii uu ku dhex dhintay saldhig boolis oo ku yaal magaalada Minneapolis ninka Marakanka Madow ahaa ee George Flyod, ayaa ciyaartoyga kooxda Liverpool badhtamaha garoonkooda Anfield ku soo bandhigeen sawir fariin taageero ah oo ay gudbinayaan.
2 Juunyo 2020
Ciyaaryahan caan ah oo isagoo cunuggiisa badbaadinaya geeriyooday
Meydka ciyaaryahan hore oo ka qeyb qaadan jiray tartanka musaaracada ayaa kusoo caariyay xeebta Venice ee ku taalla Los Angeles.
25 Maajo 2020
Go'aan Aabbenimo oo uu qaatay awgiis 'ayaa looga habaarayaa cuniggiisa'
Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Watford, Troy Deeney ayaa sheegay in dad lasoo xiriiray ay u sheegeen inay jeclaan lahaayeen in cunuggiisa yar uu ku dhaco coronavirus kaddib markii uu go'aansaday inuusan ku laabannin tababarka.
Cudurka Corona: Toos ula soco tirada kiisaska Covid-19 ee Afrika
Cudurka Corona: Tixraaca wararka Covid-19 ee Afrika
25 Maarso 2020
60 sano ka dib xoriyadda: Sooyaalkii Xisbigii SNL ee 1960-kii
Waxaa lagu jiraa bisha Xoriyadda oo dadka Soomaalida ay isu diyaarinayaan xuska 26-ka Juun iyo kowda Luuliya. Maalinta xoriyadda waxaa laga joogaa 60 sano.
11 Juunyo 2020
Cunto uu kariyay qof qaba coronavirus ma laga qaadi karaa cudurka?
Dr Cali Maxamuud, oo jooga magaalada Nairobi, ayaa ka jawaabay su'aalo ay soo weydiiyeen dhageystayaasha BBC Somali, kuwaasoo ku saabsan cudurka Covid-19.
21 Maajo 2020
Sumadda xoolaha Soomaalida: Ururin xog iyo faallayn
Uruurinta sumadaha ay Soomaalidu xoolaha ku dhigan jirtey, walina ku dhigato, sida geela, lo'da iyo adhiga.
17 Maajo 2020
Waddankee ugu deeqsisan caalamka?
Waxaan dhinacyo kala duwan ka eegeynaa sida ay dalalka ula tacaalayaan hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay xayiraadaha uu sababay Corona Fayras.
11 Maajo 2020
Inta badan bulshada Soomaalida waxay karsadaan samboos bisha Ramadan, balse dadka qaar ayaa u arka inuu shaqo badan yahay. Haddaba maxay sameeyeen?
8 Maajo 2020
Sawirrada Toddobaadka iyo caalamka
Sawirradii ugu xiisaha badnaa ee caalamka laga sameeyay isbuucan
Xulka sawirradii wararka lagu soo qaatay ee isbuucan laga sameeyay caalamka.
18 Maajo 2020
Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 3 Luulyo 2020
Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 3 Luulyo 2020
Dunida Iyo Maanta, 16:59, 2 Luulyo 2020
Xiga Dunida Iyo Maanta, 16:59, 3 Luulyo 2020
60 sanadood kaddib, miyaan dabaaldegnaa mise waan tiiraanyoonnaa?
Aynu yara joogsanno oo si dhab ah aynu u milicsano munaasabada xuska sanadguurada lixdanaad ee xorriyadda Jamhuuriyada Soomaaliya.